सलमान खान र उनका पितालाई आयो ज्यान मार्ने धम्कीसहितको चिट्ठी, — Sanchar Kendra
१संसद बैठक २ बजेसम्मका लागि स्थगित
२एमाले र माओवादी सांसद आन्तरिक छलफलमा
३बाजुराको बुढीगंगामा भोलि मतदान हुँदै, एक हजार बढी सुरक्षाकर्मी खटाइए
४विनोद शाही हत्या प्रकरण- प्रमाण नपुगेको भन्दै पक्राउ परेकी मेयर अम्बिकालाई छाड्ने तयारी
५संसद बैठक रोकेर सभामुखसँग परामर्श
६अमेरिकी डलरको भाउ अहिलेसम्मकै महँगो
७कञ्चनपुरमा विद्यालयको छतमा सुतेका धामी मृत फेला
८दाइजोको निहुँमा पत्नी हत्या गरेर फरार युवक ४ वर्षपछि पक्राउ
९अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी बिदामा
१०अर्थमन्त्रीबारे संसदीय छानविन समिति बनाउन माओवादी तयार !
११बजेटमा उठेका विषयबारे एमालेसँग छलफल गर्ने माओवादीको निर्णय
१२कस्तो रहनेछ आजको मौसम ?
सलमान खान र उनका पितालाई आयो ज्यान मार्ने धम्कीसहितको चिट्ठी,
काठमाडौँ । बलिउड अभिनेता सलमान खान र उनका पिता सलिम खानलाई आइतबार ज्यान मार्ने धम्कीसहितको चिट्ठी प्राप्त भएको छ । मुम्बई प्रहरीले यो मामिलामा एफआइआर दर्ता गरेको छ ।
समाचार एजेन्सी पिटिआईले एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै आइतबार बिहान एक अज्ञात व्यक्तिले सलिम खानलाई उक्त चिट्ठी दिएको जानकारी दिए ।
अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार मर्निङ वाकपछि सलिम खान बान्द्राको ब्यान्डस्ट्यान्डमा बेन्चमा बसिरहेका बेला एक व्यक्तिले उनलाई एउटा चिट्ठी दिए जसमा उनले सलमान खानलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका छन् ।
पछि सलिम खानले आफ्ना सुरक्षाकर्मीको मद्दतले प्रहरीलाई सम्पर्क गरे । यसबारे एफआईआर दर्ता गरिएको छ । समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार मुम्बई प्रहरीले यो घटना आइतबार बिहान साढे सातदेखि ८ बजेको बीचको हो ।
लिउडमा बुढा हुँदैनन् नायक : अभिनेत्री ३० वर्षकै उमेरमा आमाको भूमिकामा हुँदा अभिनेता कलेज स्टुडेन्ट
बलिउडका निर्देशक अभिनेतालाई बुढा मान्दैनन् । यही कारणले फिल्ममा अभिनेतासँग साथमा देखिने अभिनेतृ आधाभन्दा कम उमेरका हुन्छन् । अक्षय कुमारको नयाँ फिल्म ‘सम्राट पृथ्वीराज’ पछि पुनः यो मुद्दा बहसमा आएको छ । यो फिल्ममा अक्षयकुमारकी जोडी मानुषी छिल्लर छिन्, जसको उमेर अक्षयको उमेरभन्दा आधभन्दा अझ कम छ । अक्षयकुमार अहिले ५४ वर्षका भए भने मानुषी २५ ।
अभिनेता र अभिनेतृको उमेरमा यो अन्तर केबल अक्षयकुमारको फिल्ममा मात्र होइन । र यो बलिउडको लागि नयाँ पनि होइन । फिल्म ‘राधे’ मा ५५ वर्षका सलमान खान २८ वर्षकी दिशा पटानीसँग देखिँदैछन् । शाहरुख खानको ‘डियर जिन्दगी’ मा उनले आफ्नो छोरा आर्यन खानकी समकालीन आलिया भट्टसँग काम गरेका छन् ।
यो विषयमा अमिताभ बच्चन पनि अगाडि छन् । सन १९९९ मा प्रदर्शनमा आएको उनको चर्चित फिल्म ‘सूर्यवंशम’मा उनकी पत्नीको भूमिका गर्ने सौन्दर्या उनीभन्दा ३५ वर्ष सानी छिन् । यसैगरी सन् २०१६ मा प्रदर्शनमा आएको अजय देवगणको फिल्म ‘शिवाय’मा उनी आफूभन्दा २८ वर्ष सानी सयेशा सैगलसँग देखिएका छन् ।
अभिनेत्री ३० वर्षकै उमेरमा आमाको भूमिकामा, अभिनेता भने कलेज स्टुडेन्ट
बलिउडमा धेरैजसो नायिकाको करियर ४० वर्षको उमेर पुगेपछि ओरालो लाग्न थाल्छ । त्यसपछि तिनले काम पाउन छाड्छन् । काम पाइहाले पनि उनीहरुले आमा, भाउजु वा ठूली दिदीहरूको भूमिका पाउँछन् । जबकि ४५–५० वर्षका अभिनेता भने अझै कलेज विद्यार्थीको भूमिका निभाइरहेका हुन्छन् ।
सन् २००९ मा सार्वजनिक चर्चित फिल्म ‘थ्री इडियट्स’मा इन्जिनियरिङ विद्यार्थीको भूमिका गर्ने अमिर खान ४५ वर्षका थिए । त्यस्तै ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ मा ४४ वर्षका सन्जय दत्तले पनि चिकित्सकीय डक्टरको भूमिका गरेका थिए ।
दोस्रोतर्फ सन् २०१२ मा अनुराग कश्यपको फिल्म ‘ग्याङ्स अफ वासेपुर’मा रिचा चड्डा आफूभन्दा ११ वर्ष जेठा नवाजुद्दीन सिद्दीकीकी आमाको भूमिकामा छिन् । केजीएफमा २७ वर्षकी अर्चना जोइस २८ वर्षका अभिनेता यशका आमा बनेकी छन् ।
निर्देशकले बनाए आमा, वास्तविक जीवनमा बने प्रेमि–प्रेमिका
सन् १९५७ मा प्रदर्शनमा आएको ‘मदर इण्डिया’ मा २८ वर्षकी नरगिस आफूभन्दा पाँच दिन कान्छो सुनिल दत्तकी आमाको भूमिका निभाएकी छन् । तर फिल्म सेटमै नरगिस र सुनीलबीच प्रेम बस्यो ।
यस्तोमा फिल्मका निर्देशक महबूब खानलाई दुई अभिनेता र अभिनेत्री बीचको प्रेमले फिल्मको आमा छोराको इमेजलाई प्रभावित बनाउने लाग्यो । त्यसैले खानले नरगिस र सुनीललाई केही समय तिनको सम्बन्ध बाहिर नल्याउन भनेका थिए । फिल्म प्रदर्शन भएपछि मात्र दुई जनाको विवाह भयो ।
ब्रिटिस फिल्म उद्योगमा विरोध
ब्रिटिस फिल्म उद्योगमा लैङगिक विभेदको स्थिति बलिउडभन्दा कम छ तर पनि त्यहाँ पछिल्लो समय यो विषयमा आवाज उठेको छ । केही दिनअघि मात्रै १०० जना अभिनेता र सार्वजनिक व्यक्तित्वले यस विषयमा एक वक्तव्य निकालेका थिए । जसमा फिल्म उद्योगमा बढी उमेरका अभिनेत्रीलाई पनि बराबरीको भूमिका दिन माग गरिएको छ ।
यसरी हुँदैछ असार २४ गते नीता ढुंगाना र हरिहरको बिहे, निम्तो बाँड्न सुरु
इन्दिरा जोशीले ल्याइन् ‘पछ्यौरी’, भिडियोमा छ यस्तो रोमान्टिक शैली
‘कबड्डी ४’को प्रदर्शनमा रोक लगाउने सिक्किम सरकारको निर्णय
सुटिङ सेटमै पूजा र आकाशको सम्बन्ध छताछुल्ल
सुशान्तसँगको प्रेम स्वीकार्दै आनाले सेयर गरिन् रोमान्टिक तस्वीर
अभिनेता नवल खड्काद्वारा निर्देशित फिल्म ‘काँडेतार’को टिजर रिलिज, भिडियोसहित
प्लाटिनम जुबली पार्टीमा सहभागी हुन किमले दिएको निवेदन अस्वीकार
आर्यन खानलाई क्रुज ड्रग्स मुद्दामा क्लिन चिट